Vaovao - FIAINANA MOLD CAP MOLD
Izahay dia nanangona ny haavo farany avo lenta sy avo indrindra amin'ny famokarana bobongolo mafana any Chin.
Ny angon-drakitra vita amin'ny vokatra miolakolaka dia vakin'ny CMM mba hiantohana ny fahamarinan'ny angona sy ny fahamarinan'ny vokatra bobongolo.
Ny rano mivezivezy dia ampiana amin'ny ampahany fototra amin'ny famolavolana kofehy, ka tsy mora mivadika ilay kofehy aorian'ny famoronana azy.
Ny kofehy vita amin'ny kofehy dia noforonina tamin'ny fikolokoloana, ary ny kofehy noforonina dia tsara sy mateza ary mamirapiratra ny loko. Toy ny hoe ny anjaran'ilay kofehy dia nohosorana tamin'ny alàlan'ny fitaratra, dia mitovy ny famirapiratan'ny vokatra namorona.
Ny lava-borosy sy ny cores ary ireo faritra manan-danja hafa dia voahodina ho faritra tsy miankina. Rehefa vita ny fikarakarana ny lavaka dia ampidirina ny embryon Die. Tsy mora ny manamboatra ny lasitra, fa afaka manamboatra ny bobongolo rehefa mbola apetraka amin'ny masinina, ny vokatra vokarin'ny bobongolo dia tsy ho tapaka. Ny fitohizan'ny famokarana dia manome fepetra tsara amin'ny fampiasana feno ny bobongolo mba hamenoana ny filaminana
Mampiasa fitaovana fikolokoloana anatiny sy ivelany matihanina mba hikirakira ny vodiny aloha sy ny vodin'ilay lasitra, hifehezana tsara ny kalitao amin'ny fizotran'ny fanodinana, hamerimberina ny latabatra ary ny hadisoana dia tsy mihoatra ny 0.02mm.
Ny kofehy anatiny misy satroka tavoahangy plastika dia noforonina tamin'ny alàlan'ny fananganana nify lalina ary ny seranan-tsindrona dia notsaboina tamin'ny satrony tavoahangy.
Ny fandaminana mety amin'ny rano mivezivezy amin'ny kofehy satroka matevina ary ny bobongolo kofehy ambony dia mety hampihena ny fotoana famokarana, hanatsara ny fahombiazan'ny famokarana ary hahatonga ny kofehin-koditra tsy ho mora simba.
Ny takelaka fonosin'ny lasitra dia asiana lohany mpanohana mba tsy hiova ny maty aorian'ny fifandonana amin'ny fiasa maharitra.
Ny fifantenana ireo fitaovana fitoeram-bokatra mangarahara sy manjelanjelatra dia tokony hifanaraka amin'ny fisafidianana akora bobongolo. Ny fahakelezan'ny kaontenera vita sy ny fangaro mandritra ny fivoriambe dia tokony hofehezina, ary ny traikefa sy ny tolo-kevitra alohan'ny famokarana bobongolo dia tokony homena.
Ny lasitra bobongolo dia hafanana be loatra, ary ny aina maty dia avo tahaka ny in-tapitrisany maro, izay afaka mampihena ny vidin'ny vokatra.
Izahay dia mitandrina tsara amin'ny fampiharana ny rafi-pitetezana rano mampihena amin'ny famokarana bobongolo, izay afaka mifehy tsara ny tsingerin'ny famolavolana, manatsara ny fahombiazan'ny famokarana ary mampihena ny vidiny.